I-Relax Apartament - I-Airbnb
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Preda
U-Preda Ungumbungazi ovelele
Itholakala ku-2.9 km ukusuka e-Ovidiu Square e-Constanţa, i-Relax Apartament inikeza ngendawo yokuhlala nekhishi. Indawo ingamakhilomitha amathathu ukusuka eCasino yomlando kanye neTomis Harbour enhle yeTouristic. Futhi, eduze, kukhona isiteshi sesitimela kanye nesinye seziteshi zebhasi ezibaluleke kakhulu, lapho ungathatha khona amabhasi angakulethela noma yikuphi lapho ufuna khona e-Constanta. Kusukela lapha, ngesikhathi sasehlobo, ungathatha futhi ama-double-deckers abomvu.
Ifulethi lami lipholile, liqhele ngamakhilomitha angu-2 ukusuka enkabeni yedolobha futhi liqhele ngamamitha angu-250 kuphela esiteshini sikaloliwe. Ifulethi lisanda kulungiswa ngokuphelele, ngokunaka imininingwane.
Ifulethi liphumule kakhulu. Inekamelo lokulala elinombhede olingana nenkosi, igumbi lokuphumula elinosofa, ikhishi elihlome ngokuphelele kanye negumbi lokugezela elineshubhu elishisayo.
Kukhona i-wi-fi yamahhala kulo lonke ifulethi, indawo yokushisisa emaphakathi kanye novulandi obheke umgwaqo.
Kunama-TV ama-3 kule ndawo: eyodwa-ekamelweni, eyodwa-ekhishini, eyodwa-ekamelweni lokuphumula. Ekamelweni lokuphumula, uyakwazi ukufinyelela i-NETFLIX kanye ne-PS3 enemidlalo embalwa. Kunama-air-conditioner angu-2 kule ndawo: eyodwa-ekamelweni, eyodwa-ekamelweni lokuphumula.
Indawo yokupaka yomphakathi yamahhala iyatholakala eduze, emgwaqeni.
Ngikunikeza ikhofi netiye, mahhala.
I-100m kuphela ukusuka efulethini, kunesitolo esikhulu, lapho ungathenga khona ukudla (isinkwa, amanzi, iziphuzo, inyama, amaswidi njll.)
UPreda Ungumbungazi ovelele